Isintu namuhla asikwazi ukwenza ngaphandle kokushintshashintsha okuhlukahlukene kwezobuchwepheshe. Amashini nemishini kusiza abantu ukuthi bahambisane futhi basebenzise izakhiwo ngesikhathi esifushane. Uma kwakungeyona yezinto ezinzima, akekho owakwazi ukwakha amabhuloho amade kakhulu noma amade kakhulu kunazo zonke. Futhi ngenxa yalokho, kuba lula ukwakha izinto ezingavamile kakhulu. Futhi ngezinhloso zempi, ukusetshenziswa kwayo kudingekile. Isibonelo, ububanzi be-fighter noma i-helicopter lukhawulelwe yi-reserve fuel. Futhi ngenxa yabathwali bezindiza, leli banga landa kakhulu.
Yini ehlanganiswe nomqondo "wemishini enzima"
Lo mqondo uhlanganisa izinhlobo eziningi zemishini nemishini eyenzelwe ukwenza imisebenzi ehlukahlukene. Okokuqala, ukwakhiwa komgwaqo, kanye nemishini esindayo yempi. Uhlobo lokuqala luhlanganisa:
Abafaki bemikhumbi kanye namabhulekeli.
Uhlobo lwesibili lubandakanya amathangi, ukufakwa kwezikhali zamabhomu, izimoto zokulwa nezinsana, izithuthi zabasebenzi bezempi, izinqola zokulwa, izindiza, izindiza, izinsiza, izimoto zamabhomu, izinqola zeqhwa, njll.
Njengoba leli gama lisho, imishini esindayo yempi isetshenziselwa kakhulu izidingo zebutho kanye nokufezekisa imigomo efanele. Kulokhu, isibonelo, imishini yobunjiniyela ingasetshenziselwa izinhloso zomphakathi ukuqeda imiphumela yezinhlekelele zemvelo noma izinhlekelele.
Imishini emikhulu yaseRussia, kokubili umbuso kanye nezempi, ikhiqizwa emafektheleni ayingxenyana yezempi-yezimboni. Ngakho-ke, iningi lemifanekiso liyiqiniso kakhulu, lidlula futhi linomsebenzi omude wesikhathi eside ezimweni ezinzima.
Ubunjiniyela bomphakathi obunzima busetshenziselwa ukuthutha izimpahla ezihlukahlukene, imisebenzi yomgwaqo, ukwakhiwa kwezakhiwo nezakhiwo, amabhuloho, ukubeka amanethiwekhi omnjiniyela. Lokhu kwenza umsebenzi uzuze kakhulu ekuboneni kwezomnotho, futhi uvumela ukunciphisa imigomo yokuqaliswa. Imishini evelele kunazo zonke emhlabeni imelelwa ngamamodeli amathathu. Ahluke nje kuphela ekulinganiseni kwabo kodwa nasezintweni zabo zokuphatha.
I-excavator enkulu emhlabeni wonke i-Bagger 288. Lezi zixhobo ezinzima zakhiwa uRheinbraun nguKrupp (eJalimane). Ngosayizi, umfaki wenziwa ngaphezulu kwe-transporter yombimbi, esebenzisa i-NASA ukuhambisa ama-rocket noma ama-shuttles. Udinga imithombo yamandla angaphandle, ngakho-ke lesi siqhwaga sibhekwa njengedivayisi ehambayo yomsebenzi wezemisebenzi. Hlola amathani ayi-13.5, ubukhulu - 240x46x96 (ubude obubanzi ubude).
Umthumeli we-Caterpillar NASA ungaphansi kwe-"Bagger" kuphela. Amakhophi amabili akhona akhiwe epulatifini yamatrolliki amane. Ukulondoloza ibhalansi yomthumeli isistimu ekhethekile yokusetshenziswa kwamanzi. Lezi zixhobo ezinzima zinamamitha angu-40x35 (ububanzi ububanzi) futhi zingathwala amathani angu-6000.
Okukhiqiza kakhulu futhi kuyingozi uS Slashbuster we-excavator. Ihlonywe nge-disc enamathele ensimbi enamandla kakhulu, engaphakathi kwendawo engamamitha angu-15 ebhubhisa izihlahla kwanoma yiluphi uhlobo nokudala. Insimbi inamandla kakhulu, umkhawulo wokusika unamandla kakhulu kangangokuthi akunakwenzeka ukuyeka umsebenzi ngisho nangamabhuloki okhonkolo. Ngehora eli-1, le mishini esindayo ingabhubhisa kuze kufike ku-120 square metres ehlathini.
Kuze kube ngo-2013, okubaluleke kakhulu kwakuyiLigerr T 282B iloli lokudoba izimayini . Futhi akumangazi - ngokulingana nobukhulu bokuphatha, kungabizwa ngokufanele ngokuthi isimangaliso sesishiyagalombili sezwe. Ukukhiqizwa kwayo okuyi-serial kwaqalwa eJalimane eLieebherr. Ubukhulu obukhulu beloli buyi-14.5x8.8x6.4 wamamitha (ubude-ububanzi-ubude), amandla enjini - kufika ku-3650 hp. Amandla okuthwala amathani ayi-363.
Ngo-2013, i-BelAZ yaqala ukukhiqizwa kweloli ye-BelAZ-75710 yokudoba amaminerali. Lelilili lidlulile kuzo zonke izici "isimangaliso sesishiyagalombili sezwe". Amandla amanani wezinjini angaphezu kuka-4500 hp. Ukulinganisa okuphelele futhi okubi kakhulu: 20,6х9,75х8,17 wamamitha! Ngesikhathi esifanayo, amandla okuphatha amathani ayi-450. Iloli linama-fuel tanks amabili, umthamo ngamunye yi-2800 amalitha (i-Liebherr T 282B enye, eyenzelwe ama-4730 amalitha kagesi). Ijubane, elingakwandisa iloli, lingama-60 km / h (lapha lihle kakhulu kunomncintiswano walo - 64 km / h). "BelAZ-75710" ngoJanuwari 2014 wabeka irekhodi laseGuinness - wakwazi ukuthwala imithwalo enesisindo esingamathani ayi-503.5.
Yiqiniso, akuwona wonke abathengi abadinga imishini enzima, abaningi bangayenza ngaphandle kwayo. Kodwa zikhona izindawo zomsebenzi ezingenakugwema ngaphandle kwalo. Isibonelo, ngeke kwenzeke ukuqala ama-shuttles ku-orbit, noma ukumba imitshina ngesivinini esiphezulu. Futhi imishini enamandla yezempi kusiza ukunciphisa abasebenzi bebutho elihlomile kunoma yiliphi izwe, ngenkathi likhula, ngqo noma ngokungaqondile, ikhono lokulwa nesitha.